I-Amitiza vs. Linzess: Umehluko, ukufana, futhi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Imfundo Yezempilo Izindaba, Wellness Inkampani, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Inkampani Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imidlalo Ezempilo Inkampani Inkampani, The Checkout Ezokuzijabulisa Izilwane Ezifuywayo Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa Cindezela
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Amitiza vs. Linzess: Umehluko, ukufana, futhi okungcono kuwe
I-Amitiza vs. Linzess: Umehluko, ukufana, futhi okungcono kuwe
I-Amitiza neLinzess yimithi emibili kadokotela esetshenziswa ekwelapheni ukuqunjelwa okungapheli kwe-idiopathic (CIC) ne-irritable bowel syndrome ngokuqunjelwa (IBS-C). Ukuqunjelwa okungapheli kwe-idiopathic kubonakala esikhathini esiyizinyanga eziyisithupha noma ngaphezulu ngokuhamba kwamathumbu okuzenzekelayo kathathu noma okuncane ngesonto. I-irritable bowel syndrome iyiqembu lezimpawu ezahlukahlukene ezenzeka ndawonye kubandakanya ubuhlungu besisu kanye nezinguquko ekuhambeni kwamathumbu: uhudo, ukuqunjelwa, noma kokubili. I-Amitiza neLinzess zisetshenziswa ikakhulukazi ku-IBS ngokuqunjelwa. Sizokhuluma ngokufana nokwehluka phakathi kwe-Amitiza neLinzess lapha.
Yini umehluko omkhulu phakathi kwe-Amitiza neLinzess?
I-Amitiza (i-lubiprostone) ngumuthi kadokotela olapha ukuqunjelwa ngokwandisa uketshezi lwamathumbu emathunjini. Kuyinto etholakala nge-bicyclic fatty acid ne-prostaglandin E1 (PGE 1) esebenzisa iziteshi ze-chloride kulwelwesi lwamathumbu. Ukwanda okubangelwa yimfihlo kuguqula ukungaguquguquki kwesitulo futhi kukhuthaze ukuhamba kwamathumbu njalo. I-Amitiza iyatholakala njenge-capsule yomlomo ethambile emandleni we-8 mcg no-24 mcg.
I-Linzess (i-linaclotide) ngumuthi kadokotela okhonjisiwe ukwelapha ukuqunjelwa. I-agonist ye-guanylate cyclase C (GC-C) ebangela ukwanda kwe-cyclic guanosine monophosphate (cGMP). Isenzo ku-receptor ye-GC-C siphumela ekwandeni kwezimfihlo zamathumbu. Lokhu kubangela ukwanda koketshezi lwamathumbu futhi kwenyuse ukunyakaza kokuqukethwe kwamathumbu ngepheshana. Kukwacatshangwa ukuthi amazinga e-cGMP akhuphukile acubungula ubuhlungu obunciphile besisu esiswini esivamile ku-IBS. ILinzess iyatholakala njenge-capsule yomlomo emandleni we-72 mcg, 145 mcg, naku-290 mcg.
Umehluko omkhulu phakathi kwe-Amitiza neLinzess
Isigaba sezidakamizwa I-Bicyclic fatty acid / i-PGE 1 isisebenzisi sesiteshi se-derivative / chloride Ama-agonists eGuanylate cyclase C
Isimo somkhiqizo / ejwayelekile Umkhiqizo kuphela Umkhiqizo kuphela
Ngubani igama elijwayelekile? I-Lubiprostone Linaclotide
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Umlomo we-softgel capsule Ama-capsules omlomo
Uyini umthamo ojwayelekile? 24 mcg kabili ngosuku 145 mcg kanye ngosuku
Yelashwa isikhathi esingakanani? Akupheli, isikhathi eside Akupheli, isikhathi eside
Izimo ezilashwa ngu-Amitiza noLinzess
U-Amitiza noLinzess baboniswa ngamunye ekwelapheni ukuqunjelwa okungamahlalakhona okungapheli kanye nesifo samathumbu esibuhlungu ngokuqunjelwa. I-Amitiza iphinde yamukelwa yi-Food and Drug Administration (FDA) ekwelapheni ukuqunjelwa okubangelwa ukusetshenziswa kwe-opioid pain reliever in pain chronic, non-cancer. Lokhu kwesinye isikhathi kubizwa ngokuthi yi-OIC, ukuqunjelwa okubangelwa i-opioid.
I-Amitiza neLinzess ziboniswa kuphela ukuthi zingasetshenziswa kubantu abadala, futhi ukusetshenziswa ezinganeni nasebusheni akuvunyelwe. Udokotela wakho kuphela onganquma ukuthi le mithi iyindlela efanelekile yesimo sakho.
Isimo Amitiza Linzess
Ukuqunjelwa okungapheli kwe-idiopathic Yebo Yebo
Isifo samathumbu esingathukuthele ngokuqunjelwa Yebo Yebo
Ukuqunjelwa okubangelwa yi-opiate agonist (okungamahlalakhona, okungewona umdlavuza) Yebo Akunjalo
Ngabe i-Amitiza noma iLinzess isebenza kangcono?
TO ukubuyekeza okuhlelekile kwezivivinyo zomtholampilo ezilawulwa ngokungahleliwe ezingama-21 ziqhathanisa izithako ezisebenzayo ze-Amitiza, iLinzess, nezinye izindlela zokwelashwa ezivamile zokuqunjelwa. Ezinye izindlela zokwelapha ezifakiwe kulolu cwaningo kwakuyi-prucalopride, i-tegaserod, i-bisacodyl, ne-polyethylene glycol (i-PEG). Lokhu kuhlaziywa kuphethe ngokuthi konke okubandakanya izidakamizwa kukhombisa ukusebenza ngokufana kwe-placebo lapho kuhlolwa ukuphela kokuphela kokuhamba kwamathumbu amathathu noma ngaphezulu ngesonto. I-Bisacodyl, i-laxative yokuvuselela i-over-the-counter, yayingcono kunabo bobabili i-Amitiza neLinzess ngokuya ngoshintsho kwinani lokuhamba kwamathumbu ngesonto. Ama-laxatives ashukumisayo angadala ukungalingani kwe-electrolyte futhi athambekele ekukhuleni kokubekezelelana ngokuhamba kwesikhathi.
Ummemezeli angahle adinge ukubheka izinto ezinjengezehlakalo ezimbi, ukuxhumana kwezidakamizwa, nokuhambisana nomthamo owodwa nsuku zonke noma kabili nsuku zonke lapho ethatha isinqumo sokuthi imuphi umuthi olungele isiguli.
isikhathi esingakanani emva kocansi ungathatha isu b
Ukuqhathaniswa nokuqhathaniswa kwezindleko ze-Amitiza vs. Linzess
I-Amitiza imbozwa yizinhlelo zezidakamizwa ezentengiselwano kanye ne-Medicare Part D, noma kwezinye izimo kungadinga nokuvunyelwa kwangaphambili kokutholakala. Inani elikhishwa ephaketheni le-Amitiza lingafinyelela ku- $ 282, kepha isigqebhezana esivela kwa-SingleCare singehlisa intengo ifike ku- $ 176 ngokuthengwa kwezinsuku ezingama-30.
ILinzess imbozwa ngazo zombili izinhlelo zezidakamizwa zezohwebo nezeMedicare Part D, noma kwezinye izimo kungadinga nokuvunywa kwangaphambilini kokutholakala. Ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokumbozwa, iLinzess ingabiza cishe u- $ 640. Isigqebhezana se-Linzess esivela ku-SingleCare sizokusiza ukuthi wonge ku-Linzess, futhi ungakhokha imali engange- $ 395.
Ngokuvamile embozwe umshwalense? Yebo, kwesinye isikhathi kudingeka ukugunyazwa kwangaphambili Yebo, kwesinye isikhathi kudingeka ukugunyazwa kwangaphambili
Imbozwe ngokwejwayelekile yi-Medicare Part D? Yebo, kwesinye isikhathi kudingeka ukugunyazwa kwangaphambili Yebo, kwesinye isikhathi kudingeka ukugunyazwa kwangaphambili
Ubuningi 30, 24 mcg amaphilisi 30, 145 mcg amaphilisi
I-Medicare copay ejwayelekile Iyahluka kuya ngohlelo Iyahluka kuya ngohlelo
Izindleko ze-SingleCare $ 176- $ 204 $ 395- $ 470
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-Amitiza vs. Linzess
I-Amitiza neLinzess banezehlakalo ezithile ezibi phakathi kwabo, kepha futhi ezinye zihlukile kakhulu kumuthi ngamunye. Uhudo yisona sizathu esivame kakhulu sokuyekisa ukwelashwa kwazo zombili izidakamizwa, futhi kungumphumela ohlangothini ovamile kuzo zombili izidakamizwa.
Amitiza kungenzeka kakhulu ukuthi ibangele isicanucanu, esenzeka cishe kwesinye seziguli ezintathu ezithatha umuthi. Lokhu kubonakala kwenzeka kaningi uma kuthathwa esiswini esingenalutho. Kwesinye isikhathi lokhu kucanuzela kwenhliziyo kuba nzima futhi kuyaqeda amandla, kugcina iziguli emisebenzini ejwayelekile yansuku zonke. Iziguli zase-Amitiza zibike izehlakalo ezimbi njengesizungu, ukukhathala, nobuhlungu besifuba, kanti iziguli zaseLinzess azibikanga le miphumela emibi.
Lokhu akuhloselwe ukuthi kube uhlu olubanzi lwemiphumela emibi, sicela uthintane nodokotela wakho noma usokhemisi ukuthola uhlu oluphelele.
Isicanucanu Yebo 29% Yebo <2%
Uhudo Yebo 12% Yebo 16-20%
Ubuhlungu bekhanda Yebo ishumi nanye% Yebo 4%
Ubuhlungu besisu Yebo 8% Yebo 7%
Ukuhlukaniswa kwesisu / ukuqunjelwa Yebo 6% Yebo 2-3%
Ukuqhuma kwesisu Yebo 6% Yebo 4-6%
Ukuhlanza Yebo 3% Yebo <2%
I-Edema Yebo 3% Akunjalo n / a
Ukungakhululeki esiswini Yebo 3% Akunjalo n / a
Isiyezi Yebo 3% Akunjalo n / a
Ubuhlungu besifuba Yebo amaphesenti amabili Akunjalo n / a
I-Dyspnea Yebo amaphesenti amabili Akunjalo n / a
I-Dyspepsia Yebo amaphesenti amabili Yebo <2%
Ukukhathala Yebo amaphesenti amabili Akunjalo n / a
Umlomo owomile Yebo 1% Akunjalo n / a
Umthombo: Amitiza ( I-DailyMed I-Linzess ( I-DailyMed )
bangaki abantu abavota e-us
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kwe-Amitiza vs. Linzess
I-Amitiza neLinzess kufanele zisetshenziswe ngokuqapha ezigulini ezidla izidakamizwa ezinezakhi ze-anticholinergic. Izidakamizwa ze-Anticholinergic zingakhuthaza ukuqunjelwa futhi ziphikisane nezenzo zekhemisi zika-Amitiza noLinzess.
Iziguli ezisebenzisa i-loop diuretics, njenge-furosemide (Lasix), kufanele zigweme i-Amitiza ngoba zingaba sengozini yokulahlekelwa yi-potassium eningi (hypokalemia). Kulezi ziguli, iLinzess kungaba yindlela ekhethwayo.
Lolu akulona uhlu oluphelele lokuhlangana kwezidakamizwa okungenzeka. Ukuze uthole uhlu oluphelele, sicela ufune iseluleko sezokwelapha kuchwepheshe wakho wokunakekelwa kwezempilo we-gastroenterology.
Izidakamizwa Isigaba sezidakamizwa Amitiza Linzess
I-Scopolamine Ama-anticholinergics Yebo Yebo
I-Loperamide Ama-antidiarrhea Akunjalo Yebo
I-Torsemide I-Loop diuretics Yebo Akunjalo
I-Lactulose I-Laxative Yebo Akunjalo
I-Solifenacin I-Antimuscarinic Yebo Akunjalo
I-Methadone I-opioid Yebo Akunjalo
Izexwayiso ze-Amitiza neLinzess
I-Amitiza ingadala isicanucanu esinzima. Ukuvela kwesicanucanu kungancipha ngokuthatha i-Amitiza nokudla.
I-Amitiza neLinzess akufanele zinikezwe iziguli ezinesifo sohudo esibi ngoba lokhu kungadala ukuthi isifo sohudo sibhebhethekise. Uma isifo sohudo siqala ngemuva kokuqala ukwelashwa, yeka ukwelashwa, futhi uxhumane nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
I-Syncope, noma isiyezi lapho umile, kanye ne-hypotension, noma umfutho wegazi ophansi, kungenzeka ngemuva kokuqala kokuqala kwe-Amitiza. Iziguli kufanele ziqaphele umfutho wegazi lazo futhi zikhuphuke kancane ukusuka endaweni yokuhlala ukugwema ukuwa. Yazisa udokotela wakho nganoma yiziphi izimo zezokwelapha noma ezinye izidakamizwa ongazithatha ezingadala i-syncope ibe nzima.
usengakhulelwa ngemuva kokuthatha uhlelo b
I-Dyspnea, noma umuzwa wokuqina kwesifuba nokuphefumula okuncane, kungenzeka nge-Amitiza. Lesi sibonakaliso ngokuvamile sihlala ngaphakathi kwemizuzu engama-30 kuya kwengu-60 yedosi futhi singahlala amahora ambalwa. Uma lokhu kwenzeka, kufanele uxhumane nodokotela wakho.
I-Linzess ithwala isexwayiso esikhutshiwe kanye nesitatimende mayelana nokusetshenziswa ezigulini zezingane ngenxa yekhono lazo lokubangela ukuphelelwa amandla emzimbeni. Imininingwane engaphezulu ngalesi sexwayiso ingatholakala ku- fda.gov .
Imibuzo ebuzwa njalo nge-Amitiza vs. Linzess
I-Amitiza ngumuthi kadokotela osetshenziselwa ukwelapha ukuqunjelwa okungamahlalakhona kwe-idiopathic kanye nasekwelapheni i-irritable bowel syndrome ngokuqunjelwa. I-Amitiza nayo ivunyelwe ukwelapha ukuqunjelwa okubangelwa i-opioid ngenxa yobuhlungu obungapheli, obungewona umdlavuza. Isebenza ngokwandisa uketshezi lwamathumbu ukushintsha ukungaguquguquki kwesitulo. Iyatholakala njenge-capsule yomlomo emandleni we-8 mcg naku-24 mcg.
I-Linzess ngumuthi kadokotela okhonjisiwe ekwelapheni ukuqunjelwa okungapheli kwe-idiopathic kanye nesifo samathumbu esibuhlungu ngokuqunjelwa. Iyakwandisa okuqukethwe uketshezi lwamathumbu nokuhamba. Iyatholakala kuma-capsule womlomo ngamandla we-72 mcg, 145 mcg, ne-290 mcg.
Ngabe u-Amitiza noLinzess bayafana?
Ngenkathi u-Amitiza noLinzess belapha ukuqunjelwa, abafani. I-Amitiza iyi-bicyclic fatty acid ne-prostaglandin E1 (PGE 1), futhi idosiwa kabili ngosuku. ILinzess ingeyesigaba sama-agonists we-guanylate cyclase C (GC-C), futhi idosiwa kanye nsuku zonke.
Ngabe u-Amitiza noma uLinzess ungcono?
U-Amitiza noLinzess bakhombise ukusebenza okufanayo ekuqedeni ukuqunjelwa. Ababhali bangabheka izinto ezinjengama-dosing regimens nemicimbi emibi lapho bethatha isinqumo sokuthi imuphi umuthi olungele isiguli. I-Amitiza neLinzess bancanyelwa ukuqunjelwa okungamahlalakhona ngoba okunye ukwelashwa kwendabuko okufana nezithambisi zendle (isb. I-docusate), ama-osmotic laxatives (isb. I-Miralax), noma ama-laxatives ashukumisayo (isb. I-senna) angadala ukungalingani okukhulu kwe-electrolyte futhi athuthukise ukubekezelelana ngokusetshenziswa kwesikhathi eside.
Ngingasebenzisa i-Amitiza noma i-Linzess ngenkathi ngikhulelwe?
Izingozi ezihlobene nezidakamizwa zokusetshenziswa kwe-Amitiza noma iLinzess azikanqunywa ngoba azikho izivivinyo zokwelashwa ezanele ezilawulwa ukufakazela ukuphepha kwazo. Ukusetshenziswa kwale mithi ekukhulelweni kufanele kukhawulelwe ezimeni lapho izinzuzo zidlula ngokusobala izingozi.
Ngingasebenzisa i-Amitiza noma i-Linzess ngotshwala?
Akukho ukuphikisana okuqondile ngokuthatha le mithi nokuphuza utshwala, noma kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi utshwala bungaholela ekuphelelweni yigciwane nasifo sohudo, njengoba nayo le mithi, ibeka iziguli engcupheni yokuphelelwa amandla kakhulu emzimbeni.
Ngabe i-Amitiza ibangela ukuzuza kwesisindo?
I-Amitiza ayiboniswanga ukuthi ibangela ukukhuluphala.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uLinzess asebenze?
Ukusizwa kokuqunjelwa kuvame ukwenzeka kungakapheli isonto elilodwa noma amabili, ngokuqhubeka ngokuthuthuka kwezimpawu ezenzeka kuze kube amasonto ayi-12.
Ngubani ongafanele athathe i-Amitiza?
Iziguli ezinokuvinjelwa komshini emgudwini wazo wamathumbu (GI) akufanele zithathe i-Amitiza. Futhi, iziguli ezibhekene nohudo olulinganiselayo kuya kolubi akufanele zithathe i-Amitiza. Abesifazane abakhulelwe noma abancelisayo, kanye neziguli zezingane, kufanele bagweme i-Amitiza.
Ingabe izinhlelo zokusebenza zokuqeqesha ubuchopho ziyasebenza ngempela?
ukufaka kanjani uwoyela wetiye ekungenweni yimvubelo
Ngilutholaphi uhlobo lwami lwegazi
ingabe i-oop imeleni emshuwalense wezempilo
Ngabe uchwepheshe wekhemisi angaba usokhemisi
ungayishintsha kangaki i-tylenol ne-ibuprofen kubantu abadala
Ngingathatha ipilisi b yohlelo ngemuva kwesonto